नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको पुनर्जागरण कार्यक्रमले कांग्रेसमा साँच्चिकै जागरण ल्याउला ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः जेष्ठ ५, २०७६ - साप्ताहिक
शासन–सत्ता आफ्नो हातमा नभएर कांग्रेसलाई खुजुली मात्र भा’को हो यो ? आफ्नो आङको भैंसी नदेखी अरूको आङको जुम्रा देखाउने नाटक हो । जनता झुक्याउने फेरि अर्को खेल ।
आउँछ, राजनीति कार्यकर्ताहरूले सोचेजस्तो हुँदैन । २०६४ सालमा माओवादी कत्रो थियो अनि उसको फुर्ती कत्रो ? २०७० सालमा कहाँ पुग्यो अनि २०७४ सालमा चुनाव लडेको भए सोचौं, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा २०७४ सालमा केवल १५ लाख मत कम छ, जुन २०७६ मा आउँदा अब केवल ८ लाख मत कम छ । अबको दुई वर्षमा स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसको असर हेर्न तयार भए हुन्छ ?
कुनै हालतमा हुनेवाला केही छैन । कांग्रेसले कति वर्ष चलायो सरकार ? देखिएन र के गर्‍यो ?
कांग्रेसमा जागरण आउने भए उहिल्यै आइसक्थ्यो नि ! यस्ता कार्यक्रम त कति आए, कति गए ।
कमाउ धन्दावाला राजनीतिको अर्को गोटी ।
मरिसकेको रूखलाई पानी हालेर हरियो बनाउन सकिएला त ? यति क्षमता कांग्र्रेसमा देखियो भने कांग्रेस जतिलाई सिधै छानी–छानी नाशाको वैज्ञानिकमा सिफारिस गर्दा हुन्छ । यद्यपि कांग्र्रेसले जुत्ता पालिस पनि गर्‍यो तर टल्काउन सकेन अर्थात् सुदृढकरणको संकेत देखिएन ।
बिचराहरू ! जागरण अभियानको पहिलो दिन नै झडप, एक घाइते ।
कुनै जागरण ल्याउँदैन, इमान्दारहरूले पहल गरून् त नेतृत्वका लागि, त्यसपछि मात्र देखिन्छ चमत्कार ।
साँच्चिकै जागरण त होइन, कुटाकुटचाहिँ हुँदैछ— कांग्रेसहरू आफैं–आफैंमा । कांग्र्रेसको जागरण यस्तै हो, जाग्छन्, सुत्छन्–उठ्छन् । सरकार पनि छैन आफ्नो । पीडा छ कांग्रेसलाई अहिले ।
कांग्रेसको मनैमा जागरण गरौ भन्ने छैन, बोलीले मात्र के होला र खै ? ताजुब लाग्छ मलाई ।
चासुमहाङ कोयु राई
जागिसके नि ! पूरै हानाहान त गरिसके, जाग्ने मात्र के कुरा ?
पुनर्जागरण कार्यक्रमभन्दा जुत्ता पालिस लाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए हुन्छ । लाजमर्दो दरिलो प्रतिपक्षको भूमिकामा अडिग रहनुपर्ने कांग्र्रेस बिचरो भएको छ । कांग्रेस गुटबन्दीको दलदलमा कहिल्यै बाहिर निस्कन नसक्ने गरी फसेको छ । मुख्य राष्ट्रिय मुद्दामा अडिग रहनुको साटो मसला खोजेर बस्छ । खै ! म त पत्याउँदिनँ ।
नयाँ–नयाँ तरिकाले जनता झुक्याउने प्रपन्च ।
सबैको आचरण शुद्ध नभै जागरण जागृत हुँदैन ।
यो समयको कुरा हो । आफ्ना नीति नियममा अघि नै छ कांग्रेस ।
नमच्चिने पिङको सय झड्का ।
लागेको ग्रहण कांग्रेसले जा भन्दा जाने, लाग भन्दा लाग्ने हो ?
पुनर्जागरणभन्दा आफ्नो चरित्र–बानी आदि पुनः शुद्धीकरण र नेतृत्व परिवर्तन जरुरी छ, नत्र कुवाको भ्यागुतो कुवामै हो ।
कुनै सम्भावना छैन, यस्ता नेता बोकेर जागरण रे ।
काम गर्नेहरूले हल्ला गर्दै हिँडेको कहिल्यै देख्नुभा’छ र ? जसले केही गर्छन् तिनीहरू गुपचुप काम फत्ते गर्छन् । जब सार्वजनिक हुन्छ तब काम सफल भैसकेको हुन्छ । काम नगर्नेहरूले चाहिँ हल्ला–खल्ला गर्दै हिँड्छन्, प्रगतिचाहिँ शून्य ! यो हाम्रो देशको एउटा बलियो संस्कार हो भनौं कि कुसंस्कार !
शेरबहादुर देउवा रहेसम्म कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो मिल्दा पनि मिल्दैन र त्यस्ता सनकवाला सभापतिले मिलाउने प्रयास पनि गर्दैनन्, यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको पुनर्जागरण सिर्फ स्वैरकल्पना हो ।